Liiska oo Dhamaystiran Khaladaadka Sababtoo ah Musuqmaasuqa Macluumaadka MS Access
Bogga ugu weyn Products DataNumen Access Repair Liiska Khaladaadka oo Dhameystiran
Liiska oo Dhamaystiran Khaladaadka Sababtoo ah Musuqmaasuqa Macluumaadka Microsoft ee Helitaanka
Markaad u isticmaasho Microsoft Access inaad furto xog-ururin Access ah oo musuqmaasuq ah, waxaad arki doontaa fariimo kala duwan oo khaldan, oo laga yaabo inay kugu yara wareersan yihiin. Sidaa darteed, halkan waxaan isku dayi doonnaa inaan soo taxno dhammaan khaladaadka suurtagalka ah, oo loo kala sooco iyadoo loo eegayo inta jeer ee ay dhacaan. Khalad kasta, waxaan ku sharixi doonnaa astaamihiisa, sharxi doonaa sababtiisa saxda ah waxaanan siineynaa fayl muunad ah iyo waliba feylka ay goysay qalabkeena soo kabashada DataNumen Access Repair, si aad si fiican u fahmi karto. Hoos waxaan u isticmaali doonaa 'filename.mdb' si aan u muujino magacaaga faylka gala ee gala MDR.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,502 cod)
Qaabka keydka macluumaadka ee aan la aqoonsan 'filename.mdb' (Error 3343)
Macluumaadka 'filename.mdb' wuxuu u baahan yahay in la dayactiro ama maahan faylka keydka macluumaadka. (Error 2239) Adiga ama isticmaale kale ayaa laga yaabaa inaad si lama filaan ah uga baxdo Microsoft Office Access inta uu furan yahay keydka Microsoft Office Access. Ma rabtaa in Microsoft Office Access ay isku daydo inay dayactirto keydka macluumaadka?
Mashiinka keydka xogta ee Microsoft Jet ma uusan helin shayga 'xxxx'. Hubso in shayga jiro iyo inaad higgaadisid magiciisa iyo magaca dariiqa si sax ah. (Khalad 3011)
Diiwaanada (yada) lama aqrin karo; majiro ogolaansho akhris 'xxxx' (Khalad 3112)
Ma furi karo diiwaanka 'filename.mdb'. Ma noqon karto xog ururin oo dalabkaagu aqoonsan yahay, ama faylka wuu musuqmaasuqi karaa. (Khalad 3049)
Ma lihid rukhsadaha lagama maarmaanka u ah adeegsiga shayga 'filename.mdb'. Miyuu maamulaha nidaamkaaga ama qofka abuuray shayga kuu dejiyaa rukhsadaha kugu habboon. (Khalad 3033)
Nooca xogta berrinka aan ansax ahayn (Error 3259)
Khalad lama filaan ah 35012
Isbeddelada aad ka codsatay miiska may guuleysan maxaa yeelay waxay abuuri doonaan qiimayaal nuqul ah tusmada, furaha koowaad, ama xiriirka. (Khalad 3022)
Microsoft Access waxay ogaatay in keydkaan keydku uu ku jiro xaalad aan is waafaqsanayn, wuxuuna isku dayi doonaa inuu dib u helo xogta. Inta hawshani socoto, nuqul keyd ah oo keydka xogta ayaa la sameyn doonaa dhammaan walxaha la soo helayna waxaa lagu meeleyn doonaa keyd cusub. Helitaanka ayaa markaa furi doonta xogta cusub. Magacyada walxaha aan si guul leh loo soo kaban waxay ku qornaan doonaan miiska "Khaladaadka Soo Kabashada". (Khalad 9505)
Microsoft Access waxay weydiisataa lambarka sirta ah marka la furayo xog ururin musuqmaasuq ah.
Database lama furi karo maxaa yeelay mashruuca VBA ee ku jira lama aqrin karo. Kaydinta macluumaadka waxaa la furi karaa oo keliya haddii mashruuca VBA marka hore la tirtiro. Tirtirida mashruuca VBA waxay ka saareysaa dhammaan koodhadhka qaybaha, foomamka iyo warbixinnada. Waa inaad kaydisaa macluumaadkaaga kahor intaadan iskudayin inaad furto keydka macluumaadka oo tirtirto mashruuca VBA. (Khalad 29081)
'Id' maahan tusmo ku qoran shaxdan. ama 'AOIndex' maahan tusmo ku qoran shaxdan. (Khalad 3800)
Ma aha calaamadeyn sax ah. (Khalad 3159)
Khalad keyd ah (- ####); wax fariin ah uma laha qaladkan. (Khalad 2626/3000)
Faylkaan waxaa laga yaabaa inuusan badbaado lahayn haddii uu ka kooban yahay koodh loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo kombuyuutarkaaga.
Tixraacaaga, waxaan u aruurineynaa liistada dhammeystiran ee Khaladaadka Helitaanka noocyada Helitaanka ee kala duwan:
Liiska Dhamaystirka Khaladaadka 2003
Liiska Dhamaystirka Khaladaadka 2007
Liiska Dhamaystirka Khaladaadka 2010
Liiska Dhamaystirka Khaladaadka 2013
Liiska Dhamaystirka Khaladaadka 2016